July | 2014 | နည်းပညာပျိုးခင်း | Page 2
How to migrate Server 2003 to Server 2008?
July 19, 2014 Phyo Lwin Migrate, Windows
စမ်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ Server 2003 ကနေ Server 2008 ကို migrate လုပ်တဲ့ အဆင့်တွေကို လေ့လာဖြစ်ပြီး စမ်းကြည့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ လုပ်ရတဲ့အဆင့်တွေကိုလဲ screen shot လေးလုပ်ပြီး PDF ဖိုင်တစ်ခု လုပ်ထားတယ်။ လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ကလင့်ကနေ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။ လိုခဲ့တာလေးများရှိခဲ့ရင်လဲ ပြန်ပြောပေးပါဦး။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
How to collect the software lists of your PC with Powershell in Win 7?
July 19, 2014 May 26, 2015 Phyo Lwin Windows
တစ်နေ့က ဟိုကြည့်ဒီကြည့် ကြည့်ရင်း Windows7မှာ Power Shell ကနေ စက်ထဲမှာ အင်စတောလုပ်ထားတဲ့ Software Lists ကို ဘယ်လိုကြည့်လို့ရလဲဆိုတာကို သိလိုက်ရတယ်။
ပထမဆုံး Start ကို Click လုပ်ပြီး Powershell လို့ရိုက်ပြီး Windows PowerShell ကို ကလစ်လိုက်ပါမယ်။
ပြီးရင် အောက်က Screenshot ထဲကအတိုင်း command ကို ရိုက်လိုက်ရင် ဘာတွေအင်စတောလုပ်ထားလဲ ဆိုတာကို ပြပါလိမ့်မယ်။
ရိုက်ရမယ့် command ကတော့
ပြီးတော့ အဲဒီစာရင်းကို ဖိုင်အနေနဲ့ သိမ်းထားချင်တယ်ဆိုရင် အောက်ကပုံလေးထဲကအတိုင်း ကွန်မန်းကို ရိုက်လိုက်ပါမယ်။
Get-WmiObject -Class Win32_Product | Select-Object -Property Name > C:\_Software\_list.txt
ဒီနေရာမှာ သတိထားရမယ့် အချက်က အပေါ်က ကွန်မန်းကို ရိုက်လိုက်လို့ အထက်က ပုံထဲကအတိုင်း Error ပေါ်လာပါမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ C:\_ အောက်မှာ software ဆိုတဲ့ဖိုဒါ မရှိလို့ပါ။ C:\_ အောက်မှာ software ဆိုတဲ့ ဖိုဒါအရင်ဆောက်ထားဖို့ လိုပါမယ်။ နောက်ပြီးတော့ အဲလိုသိမ်းထားတဲ့ဖိုင်တွေကို compare လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် အောက်က ကွန်မန်းကို ရိုက်ပေးရပါမယ်။
Compare-Object -ReferenceObject (Get-Content C:\_Software\_PC၁.txt) -DifferenceObject (Get-Content C:\_Software\_PC2.txt)
…=> လို့ပြတာက PC2 မှာ install လုပ်မထားဘူး။
အထက်ကနည်းအတိုင်း PowerShell ကို သုံးပြီးတော့ Software List ကို စာရင်းလုပ်လို့ရပါတယ်။
July 19, 2014 Phyo Lwin CISCO, Networking
If you would like to know how to recovery password on cisco 1800 Series Router, please download and read from the below link.
How to setup Router for home or small office?
July 19, 2014 May 26, 2015 Phyo Lwin Networking
ဒီနေ့ home or small office အတွက် router configuration တွေကို note ရေးမယ်စိတ်ကူမိတယ်။
သိပြီးသားသူတွေအတွက်တော့ မထူးဆန်းပေမယ့် မသိတဲ့သတွေအတွက်တော့ တော်တော်ခက်နေပါလိမ့်မယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ router ထဲကိုဝင်ပြီး configuration တွေကိုပြင်ဖို့အတွက် router ရဲ့ IP Address ကို သိဖို့လိုပါတယ်။
အဲလိုသိဖို့အတွက်ကွန်ပျူတာကို router ကို နပ်ဝပ်ကေဘယ်နဲ့ချိတ်ပါ။ ပြီးရင် computer ရဲ့ IP Address Setting မှာ DHCP ကို ရွေးထားပါ။ ပြီးရင် command prompt ကနေ ipconfig /all ကွန်မန်းနဲ့ IP Address ကို ကြည့်ပါ။ အဲဒီမှာ default gateway မှာ ပေါ်နေတဲ့ IP Address က router ရဲ့ IP Address ပါပဲ။
သိရပြီဆိုရင် အဲဒီ IP Address ကို Command prompt ကနေပဲ ping 192.168.1.1 (ဒါကတော့ ဥပမာအနေနဲ့ ပြောတာပါ) လို့ရိုက်ပြီး enter နှိပ်လိုက်ပါ။ reply ပြန်လာတယ်ဆိုရင် ကျွန်ပျူတာနဲ့ router ကြားမှာ Connection ရှိနေပါဘီ။
အဲဒီ IP Address ကိုပဲ Browser ကနေ ခေါ်လိုက်ပါ။ User name and password တောင်းပါလိမ့်မယ်။ Router ရဲ့ ကျောဘက်မှာ ရေးထားပါတယ်။ အဲဒါကိုသုံးပြီး Router ထဲကို ဝင်ပါ။
ဒီ note ထဲမှာတော့ Linksys E1200 series router နဲ့ လုပ်ပြသွားပါမယ်။
ပြီးရင် Internet connection type မှာ ယူထားတဲ့ လိုင်းပေါ်မူတည်ပြီး တစ်ခုခုကို ရွေးပါ။
Static IP လား automatic configuration – DHCP လား။ ယူထားတဲ့လိုင်းက IP DHCP ဆိုရင် ဒီနေရာမှာDHCP ကို ရွေးလိုက်ယုံပါပဲ။ တစ်ကယ်လို့ ယူထားတဲ့လိုင်းက Static IP ဆိုရင် ပေးထားတဲ့ IP Address ဆိုရင် ပေးထားတဲ့ IP Address, Subnet mask, default gateway, DNS Server Address တွေကို ပေးထားတဲ့အတိုင်းထည့်ပါ။ ဒါပြီးရင် ဒီနေရာမှာ ပြင်စရာပြီးပါဘီ။
ပြီးရင် Router Address နေရာမှာ ကိုယ့် Network အတွက် သင့်တော်တဲ့ IP Address ကို ထည့်ပါ။
ဒီနေရာမှာတော့ ကျွန်တော်က 192.168.13.1/255.255.255.224 ကို ရွေးထားပါတယ်။
IP Address နဲ့ ပက်သက်ပြီးတော့ နောက်အဆင်ပြေတဲ့အချိန်ကျရင် ထပ်ရေးပါဦးမယ်။
ပြီးရင် DHCP Server Setting မှာ on/off အဆင်ပြေရာ ရွေးပါ။ On ထားမယ်ဆိုရင်တော့ Start IP and end IP ကို ထည့်ပါ။ On ထားမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီ Router ကို ချိတ်ပြီးသွားတဲ့ Device တွေမှာ IP Address တွေကို ရိုက်ပေးစရာမလိုတော့ဘဲ (အဲဒီ Device တွေမှာလဲ IP Setting မှာ DHCP ကို ရွေးထားမယ်ဆိုရင်) အလိုလိုဖြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Off ထားမယ်ဆိုရင်တော့ Client Device တွေမှာ IP Address တွေကို Manual ထည့်ပေးဖို့လိုပါမယ်။
အဲလိုထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Default Gateway ကတော့ အဲဒီ Router ရဲ့ IP Address ပေါ့။ ဒီမှာဆိုရင်တော့ 192.168.13.1 ပါ။
Wireless Setting မှာတော့ ကိုယ်သုံးမယ် Device တွေအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ Network Mode, Channel Width, Channel တွေကို ရွေးလိုက်ပါမယ်။
Network Name(SSID) မှာတော့ CISCO လို့ ထည့်လိုက်ပါမယ်။ အဲဒီနာမည်က Wireless Device တွေကနေ အဲဒီ Router ကို Connect လုပ်ချင်ရင် Wireless Network တွေထဲက အဲဒီနာမည်ကို ရွေးပြီး ချိတ်လိုက်ဖို့အတွက် နာမည်ပေးတာပါ။
Wireless Security အောက်မှာတော့ Security Mode and preshare key တွေကို လိုချင်သလို ထည့်လိုက်ပါမယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ WAP2 personal ကို ရွေးပါတယ်။ WEP ကတော့ Security သိပ်မကောင်းလို့ မသုံးဖြစ်ပါဘူး။
ပြီးရင် Save Setting လုပ်လိုက်ရင် ပြီးပါပြီ။
How to use GNS3?
July 19, 2014 April 14, 2015 Phyo Lwin CISCO, GNS3, Networking
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်မှာ ရေးဖြစ်ခဲ့တာလေးကို ပြန်ရှယ်တာပါ။
GNS3 ကို http://www.gns3.net ကနေ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။
GNS3 ကို အင်စတောလုပ်ပြီးဘီဆိုရင် cisco ios တွေ အလုပ်လုပ်အောင် ဘယ်လို config လုပ်လဲ အရင်ဆုံး လုပ်ပြပါမယ်။ အင်စတောလုပ်ပြီး GNS3 ကို ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ အောက်ကပုံအတိုင်း မြင်ရပါမယ်။
New Project တ​ွေ သိမ်းမယ့်နေရာတွေကို save မယ့်ဖိုင်လမ်းကြောင်းပါ။ ဒီနေရာမှာတော့ cancel ပဲ လုပ်လိုက်ပါမယ်။ ပြီးရင် အောက်ကပုံအတိုင်း Edit Menu ကနေ IOS images and hypervisors ကို ကလစ်လိုက်ပါမယ်။
ပြီးရင် External hypervisors tab ကို ကလစ်ပြီးတော့ အနီဝိုင်းထားတဲ့အတိုင်းမှန်ရင် save လုပ်လိုက်ပါမယ်။
Save ပြီးတာနဲ့ အောက်ကပုံအတိုင်း မြင်ရပါမယ်။
ပြီးရင် IOS images tab ကို သွားပြီးတော့ setting အောက်က image file ကို ရွေးပေးပါ။ အောက်ကပုံလေးကို ကြည့်လိုက်ပါမယ်။
အောက်ကပုံထဲကအတိုင်း မေးပါလိမ့်မယ်။ uncompress လုပ်ဖို့အတွက် yes ကို ကလစ်လိုက်ပါမယ်။
ပြီးရင် save လိုက်ပါမယ်။ အဲဒီမှာ သတိထားမိလားမသိဘူး။ ဖွင့်လိုက်တုန်းကတော့ .bin ဖိုင်။ ဒါပေမယ့် uncompress လုပ်မယ်ပြောလိုက်တဲ့အတွက် .image ဆိုပြီး ဖိုင်တစ်ခုတိုးလာပါတယ်။ အဲဒါကတော့ စောစောက uncompress လုပ်ပြီးရလာတဲ့ image ဖိုင်ပါ။
နောက်ထပ် IOS တစ်ခုကိုလဲ အဲဒီအတိုင်းလုပ်လိုက်ပါ။ ဒီပို့ရဲ့အောက်ဆုံးမှာ IOS(2600 and 7200) ဖိုင်၂ခုကို ဒေါင်းဖို့လင့်ထည့်ပေးထားပါတယ်။
အဲဒါတွေပြီးသွားပြီဆိုရင် close ကို ကလစ်ပြီး IOS image and hypervisor ကို ပိတ်လိုက်ပါမယ်။ အခုဆိုရင် Router 2600 & Router 7200 IOS ၂ ခုကို image ထည့်ပြီးဘီဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီ Router ၂ ခုကို စသုံးလို့ရပါဘီ။ တခြား router တွေကို သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သက်ဆိုင်ရင် ios image တွေကို ထည့်ပေးဖို့လိုပါမယ်။ 2600 or 7200 router ကို မောက်နဲ့ ကလစ်ပြီးတော့ drag and drop လုပ်လိုက်ပါမယ်။ ပြီးရင် router ပေါ်မှာ right click လုပ်ပြီး start ကို ကလစ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် router ပေါ်မှာ right click လုပ်ပြီး console ကို ကလစ်လိုက်ပါ။
နောက်ထပ် Windows တစ်ခုပေါ်လာပါမယ်။ အဲဒီမှာ တကယ့် Router တွေမှာ အလုပ်လုပ်သလိုမျိုးတွေ့ရပါမယ်။ ခဏလောက်နေရင် enter ကို နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ အောက်ကပုံအတိုင်း မြင်ရဘီဆိုရင်တော့ router configuration စလုပ်လို့ရပါဘီ။
cisco ios ကို အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းလို့ရပါတယ်။
http://bit.ly/KATUOk 2600 ကို ဒေါင်းရန်
http://bit.ly/LOe88j 7200 ကို ဒေါင်းရန်
ကိုးပုံမြောက်က what is IDLEPC ဆိုတာလေးကို သတိထားမိလားမသိဘူး။ အဲဒါက ဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုရင် CPU Usage ကို ပြန်လျော့ချဖို့အတွက်ပါ။ GNS3 မှာ Router တွေကို Start လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင် CPU Usage က 100% လောက်ယူသုံးလိုက်တယ်။ ဘယ်လိုလျော့ချမလဲဆိုရင် Router ကို Right Click လုပ်ပြီး IDLE PC ကို ကလစ်ပါမယ်။ အဲဒီအထဲက * ပါတဲ့ နံပါတ်ကို ရွေးလိုက်ပါ။ အဲဒါဆိုရင် CPU Usage ကို လျော့ချပေးပါလိမ့်မယ်။